Resaky ny Mpisera Shinoa: Nohosen’ny The Onion ny People’s Daily · Global Voices teny Malagasy
Resaky ny Mpisera Shinoa: Nohosen'ny The Onion ny People’s Daily
Voadika ny 04 Desambra 2012 4:21 GMT
Efa tapitra ny amin'ity vaovao ity ankehitriny: Namingana ny tenany ihany ny gazety Shinoa People’s Daily tamin'ny herinandro raha nitatitra tamim-pahamatorana fa ny mpitarika koreana tavaratra Kim Jong-un no lehilahy manaitra-manintona indrindra mbola velona araka ny fanondroan'ny The Onion, gazety mpananihany iray avy any Etazonia. Rehefa tonga an-tserasera ny resaka dia naka ny vaovao ny fampahalalam-baovao iraisampirenena manana ny lazany tahaka ny The New York Times sy ny The Wall Street Journal. Nanara-dia ihany koa ny gazety avy any Angletera The Telegraph miaraka amin'ny fehezanteny notsongaina avy amin'ny tonian'ny People’s Daily, nilaza fa tsy hahasarika loatra ity resaka ity (efa najanona moa ny tantara avy eo).
Efa tahaka ny tara loatra anefa, tsy vitan'ny hoe niely tany amin'ny fampitam-baovao iraisam-pirenena ny resaka fa nalaza dia nalaza ihany koa tao amin'ny Weibo, izay tahaka ny Twitter any Shina. Raha nisy mpiserasera mavitrika “Milaza ny tenany ho any NY” [New York] nizara ny vaovao voalohany tao amin'ny Weibo, nahazo fampitan-kafatra mihoatra ny 40.000 io sy fanehoan-kevitra 7.900.
Netizen “Pretend in NY” shared foreign media's comments on Chinese social media
Maro ny Shinoa ny nitokelaka tamin'izy ity. Ny sasany nahatsiaro menatra ka nitsikera ny fitondrana; nisy ny hafa tena tezitra ka nanontany izay tanjon'ny gazety vahiny.
Hehy sy Eso iray vilia
OnionWeekly nanoratra tamim-panesoana:
Hariva madiva ho alina, renay fa ny The Onion sy ny People’s Daily dia nampita tamin'ny fomba ofisialy, ary nahazo fankasitrahana avo dia avo avy amin'ny The Onion ny People’s Daily. Faly izhay milaza fa ny The Onion Weekly sy ny People’s Daily no mitondra tokoa ny tena feon'i Shina.
Mampiako ny resaka i Miresaka ny asa ao amin'ny tranom-boky:
Mieritreritra ny tenany ho habaka tsara indrindra amin'ny fakan-tahaka amin'ny fomba mampihomehy ny People’s Daily, nefa tsy tsapan-dry zareo fa misy hatrany ny fifaninanana. Tamin'ity indray mitoraka ity, tsy nanan-kambara ry zareo ka tsy nanao afa-tsy ny namafa azy tamim-pahanginana.
Mpnao gazety zokiolona sady mpikaroka Xu Shenghai niresaka:
Tia mifanorokoro-body ny Shinoa sy ny KOreana Tavaratra, niteny aza moa tamin'ny herintaona ny Koreana Tavaratra fa i Shina no firenena demokratika indrindra eto an-tany ary i Amerika no tsy demokratika indrindra, izay teniteny foana!
gdaygluck nanao hatsikana:
Tsy manam-potoana hianarana ny fomba fihevitry ny antoko isan'andro ny tonian'ny People’s Daily, ahoana moa no ahafantarany fa mety hihinana azy [tampoka] ny tongolo [onions] na ny ovy.
Tsy misy mamaky ny People's Daily?
Liang Weihao, tonian'ny Central Broadcasting Station no manoratra:
Mihomehy ny gazety vahiny rehetra, satria na ry zareo aza mieritreritra fa mamaky People’s Daily isika Shinoa.
Xunxi’s sheep dad namaly:
Te-hisarika ny maso fotsiny ny People’s Daily, satria tsy misy mamaky ry zareo amin'ny ankapobeny.
News Lecturer Yi Qiliang niresaka:
Fahadisoana tsy nahy iny, izay azo avela satria afa-mianatra ny People’s Daily amin'ny fanokafana bebe kokoa ny fijeriny, saingy, tia fahefana loatra i Kim Jong-un, ompa amin'ny hatsarana na dia ny mieritreritra azy fotsiny hoe manaitra-manintona, tsy mahalala ny atao hoe meva ve ny tonian'ny People’s Daily? Makandoa ny mieritreritra hoe ankafizin-dry zareo ny fahefana mitanjaka.
Diso fanantenana i Taorock No 2:
Jereo, nanao fahadisoan'ny gazetin'ny antoko, manala azy amintsika Shinoa ny fampitam-baovao iraisampirenena. Manan-javatra ho antsika sarambaben'ny olom-pirenena ve ny People’s Daily? Tsy maintsy mifampiraharaha amin'izao diky betsaka izao amin'ny anaran'ny Antoko isika Shinoa tao anatin'ny taona maro.
Nitsikera i Between Light & Dark:
Azonao jerena izao hoe lasa moramorainy tahaka ny ahoana moa ny fampitam-baovao ofisialy.
Xu Jinbo, lehiben'ny fampahalalam-baovao Asia News tena hita mivandravandra fa tezitra:
Masiaka ny fampitam-baovao Japoney, mba mitatitra fotsiny ny People’s Daily momba an'i Kim Jong-un ho “lehilahy mahafinaritra jerena indrindra,” ary dia mamelively antsika ireo fantsona fahitalavitra sy gazety ireo, tondroin'izy ireomivantana ny gazetin'ny antoko. Tokony handresy lahatra ny manam-pahefana ny People's Daily ny hanakana ireo gazety mora taitaitra ireo ary handra azy ireo amin'ny fanatrehana valan-dresaka manan-danja!
Namaly i Democratic Rice:
Nahoana no raràna izy ireo? Satria tsikera avy any Japana? Izany angaha ny fomba fanao eto Shina? Nanao fahadisoana amin'ny tsy misy dikany ny People's Daily amin'ny maha-loharanom-baovaon'ny manampahefana azy, tokony eritreretin-dry zareo ny momba ny fhadisoany. Tsy manaikitra atody tsy vaky ny moka; tokony hahazaka tsikera ny milaza tena ho firenen-dehibe.